Tababbarka Caafimaadka - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Maaraynta Caafimaadka > Tababbarka Caafimaadka
Ma haysaa neef, COPD, sonkorow, ama wadne istaag? Tababarayaasheena caafimaadka ayaa halkan u jooga inay ku caawiyaan.
Tababarayaasha caafimaadku waxay ka taageeraan xubnaha xiiqda, cudur sambabaha oo raaga, wadne xanuun, iyo / ama sonkorow
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) wuxuu siiyaa tababar caafimaad oo khaas ah xubnaha leh mid ama in ka badan oo ah baaritaanada soo socda:
Cudurka macaanka ama macaanka
Cudurka sambabka oo muddo dheer xannibnaa (COPD)
Muxuu sameeyaa tababaraha caafimaadku?
Tababarayaasha caafimaadku waxay ka caawiyaan xubnaha inay la tacaalaan xaaladaha caafimaad ee daba dheeraada. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad kaa taageerto sameynta isbeddelada hab-nololeedka caafimaadka leh, ku baraya sida loo qaato daawooyinkaaga, iyo kaa caawinta inaad fahamto nidaamka daryeelka caafimaadka.
Tababaraha caafimaadka CHPW ayaa kaa caawin kara waxyaabaha sida:
Kordhinta dhaqdhaqaaqa jirka
Qaadashada daawooyinkaaga (daawooyinkaaga) jadwalka
In aad dhaqtarkaaga ugala hadasho baahiyahaaga caafimaad
Isticmaalka qalabka caafimaadka sida glucometer ama inhaler
Barashada farsamooyinka neefsashada ee ka caawiya yareynta calaamadaha COPD
Barashada sida nidaamka daryeelka caafimaad u shaqeeyo si aad u hesho daryeelka aad u baahan tahay
Adeegyada tababarka caafimaadka ayaa ah shaqsi ahaan oo ku dar khibradahaaga, qiyamkaaga, waqtigaaga, iyo ilahaaga.
Sideen isku diiwaan geliyaa tababarka caafimaadka?
Dhakhtarkaaga ayaa kuu diri kara tababarka caafimaadka adiga oo la xiriiraya anaga Kooxda Adeegga Macaamiisha. Adiguba waad gudbin kartaa.
Haddii aad haysato ilmo qaba neef, kaadi macaan, ama xaalad kale oo iyaga uqalma tababar caafimaad, waad u diri kartaa ilmahaaga. Tababarayaasheena caafimaadka ayaa kula shaqeyn doona si loo maareeyo xaalada ilmahaaga oo loo baro caadooyinka caafimaad ee ay u baahan doonaan si ay hadhow isu maareeyaan hadhow.
Waa kuwan qaabab kale oo aan ku heli karno xubno u qalmi kara tababarka caafimaadka:
Waxaan eegeynaa natiijooyinka qiimaynta caafimaadka in dhammaan xubnaha Medicare Advantage ay qaataan sanadkiiba, iyo in xubnaha Apple Health ay qaataan markay ku biiraan CHPW.
Waxaan eegnaa data ururiyey maaraynta isticmaalka iyo maaraynta kiisaska.
Xubnaha waxaa sidoo kale loo gudbin karaa foomka Tababbarka Caafimaadka ee barnaamijyadeena kale, sida Maareynta Kiiska.
Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan tababarka caafimaadka, ama aad rabto inaad adigu tixraacdo, fadlan la soo xiriir annaga Kooxda Adeegga Macaamiisha.